Knowledge – Page2– Shwe Yaung News
Sep 15, 2021 2021
သာကူယိုတွေ ဘာတွေညာတွေ လုပ်စားနေတဲ့ သာကူစေ့ကို ဘယ်ကရလဲဆိုတာ သိပြီးပြီလား “သာကူစေ့ဘယ်ကစဖြစ်လဲဆိုတာ သိလိုက်ရသောအခါဗဟုသုတ ရရှိစေမည့် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထန်းလျက် သာကူ/သကြား သာကူ နှင့် သာကူစေ့ပါဝင်သော အစားအစာတွေ အများအားဖြင့် စားသုံးဖူးကြပါတယ်။…
Sep 14, 2021 2021
“သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီးအား ဂါထာစွမ်းအားသတ္တိ ရရှိလာအောင် ရွတ်ဆိုနည်း” နံနက် အရုဏ်တက်ချိန် ၅နာရီတွင် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီးအား ရွတ်ဖတ်ရပါမည်။ ရွတ်ဖတ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျှင် ၊ ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းခြင်းခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်း သန့်ရှင်းသော အဝတ်စားကို ဝတ်ဆင်ခြင်း ရဟန်းမှန်သမျှဒေသနာကြားခြင်း ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရပါမည် ။…
ကင်ဆာဆဲလ် ၉၈% ရာခိုင်နှုန်း သေစေနိုင်တယ်ဆိုလဲ မမှားတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီး ကက်ဟင်းခါးသီးပင်လေးဟာ အာရှတိုက်မှာဆိုရင် သာမန်အပင်လေး တစ်ပင်လောက်ပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝစ်ကီနာဝါက နှစ်ပေါင်းကြာရှည်အသက်ရှင်တဲ့ လူဦးရေတွေကြား အတော်လေး လူသိများပါတယ်။ ရေပါဝင်မှု ပမာဏ (၅%) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့…
လမ်းပျောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေ ဒီမေးခွန်းတွေဖြေကြည့်ပါ။
လမ်းပျောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေ ဒီမေးခွန်းတွေဖြေကြည့်ပါ။ လမ်းပျောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေ ဒီမေးခွန်းတွေဖြေကြည့်ပါ။လူငယ်တွေဟာ ဒီကာလမှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတာ မြင်ရတာ တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာ အင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အင်မတန် သင်ယူနိုင်တယ်။တွေးနိုင်တယ်။လုပ်နိုင်တယ်။ဒါ့ကြောင့် အထူးသဖြင့် ၁၈ – ၂၅ ကြားလူငယ်တွေ လမ်းပျောက်နေတာကို…
သူ့ထမင်းထုပ်နဲ့သူလာတာပါနောင်တမရအောင် ဖတ်ကြည့်နော် သူ့ထမင်းထုပ်နဲ့သူလာတာပါကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်.အစကတော့သာမာန်ပါပဲ.နောက်တော့အိမ်ထောင်ကျတယ်စီးပွားရေးလေးအဆင်ပြေလာတယ်.မိဘတွေက၀န်ထမ်းဆိုတော့.ပင်စင်ယူတဲ့အခါနေစရာစားစရာမရှိတသက်လုံးက၀န်ထမ်းဘ၀မှာစိတ်ဖိစီးလာခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေနဲ့.ကျန်းမာရေးကချူချာ.အားလုံးထက်စာရင်.နည်းနည်းပါးပါးအဆင်လည်းပြေ.သားအိမ်ထက်စာရင်.သမီးအိမ္ကေနရတာ. ပိုအဆင်ပြေတယ်.ချွေးမနဲ့ကျ ငြူစူမစိုးလို့.သူမအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်. သူမက. စီးပွားရေးက.ခုမှအဆင်ပြေစဆိုတော့.အဝေးကပဲထောက်ပံ့ချင်တယ်.အတူနေတဲ့သားသမီးက.ငရဲပိုကြီးတယ်. ပြောမှားဆိုမှား.ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လေ.ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်. ရပ်နိုင်လည်း.မိဘအရိပ်နေတုန်းကလို. သတိထားပေါ့အေ.အပြောမမှားစေနဲ့ပေါ့.လို့.ကျမကပြောလိုက်ပါတယ် အသက်ကြီးလာတော့.စကားများလာတာရှိတာပေါ့လေ.ကျန်းမာရေးကမကောင်းတော့စိတ်တိုင်းကမကျ. လူကွီးဆျိုတော့လညျး..ဟိုလို.ဒီလို.ဇီဇာလေးတော့. ကြောင်တာပေါ့..သူမကဘာပြောလည်းဆိုတော့.သားသမီးဆယ်ယောက်ကို.မိဘ၂ပါးကကျွေးနိုင်တာ.သားသမီးလိုကျွေးရလို့ပါ ၀နထြမြးသားသမီးဘဝမှာ.မောငျနှမသားခငြျးမြားတော့.ဘဲဥတခွမျးဆို.တခွမျး.အကှောတြဈခုဆြို.တစ်ခု.ဝကအြူခွောငြး.လက်တစ်ဆစ်ဆို.တဆဈ.ပနျးကနျထဲထမငျးခူး.ဟငျးကိုဝပေုံကွနဲ့စားခဲ့ရပမေဲ့.မိဘကိုတော့.သားသမီးထားသလို.ထားမရဘူးလေ..တဲ့.ပွီးပွီးရော.ထမငျးထဲဘဲဥတခွမျးတည့ျ.င့ျ.စား.ဆိုလို့.မရဘူးတဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်ငရဲကအော်တိုကြီးတယ်.ကိုယ်ကအလုပ်ရှုပ်တယ်လေ.သူတို့က.ထမင်းခူးမပေးရင်.မစားဘူး.အားတဲ့အချိန်လေး.ခူးပေးတော့.မဆာသေးဘူး.မအားမွ.ထမင်းစားမယ်.. ဆိုတော့.ငြိုငြင်မိပါတယ်.ကျမမှာတော့အမေနဲ့အဖေရောက်ကတည်းက.ငရဲ.၀ယျနရေသလိုပဲတဲ့ တလ.တလ. ဆေးဖိုးလည်း..၁၅သိန်း.ထက်မနည်းဘူး.ဆေးကလည်းဈေးကြီးချက်.ငွေနဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်.ပိုက်ဆံနှမြောလို့ပြောတာ. မဟုတ်ပါဘူး..တခြားမောင်ဆီမှာသွားနေရင်.က်မက.ပိုက်ဆံကုန်ပေမဲ့.အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့. တဲ့.ကုန်ကျစားရိတ်တွေအကုန်.က်မကေထာက္ပံ့မွာပါတဲ့ သမီးဖြစ်သူနဲ့မသေခင်.…
ထမင်းစားခါနီး လောက်ကောင်လေးတွေပါလာတာမြင်ပေမယ့် ဗိုက်ဆာလွန်းတာကြောင့် မသွန်ပစ်နိုင်ပဲ စားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောလာတဲ့ PDF လူငယ်လေး
Sep 13, 2021 2021
ထမင်းစားခါနီး လောက်ကောင်လေးတွေပါလာတာမြင်ပေမယ့် ဗိုက်ဆာလွန်းတာကြောင့် မသွန်ပစ်နိုင်ပဲ စားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောလာတဲ့ PDF လူငယ်လေး တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးအတွက် ပြည်သူတွေမှာ ပေးဆပ်မှုတွေများပြားနေပြီး မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေမှာလည်း တောထဲမှာစစ်သင်တန်းတွေတက်ရောက်ကာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲတောင်ထဲ မိုးထဲလေထဲမှာ ဖြစ်သလိုကြုံသလိုနေထိုင်စားသောက်ရင်း အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့နဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်တွေအတွက် အစွမ်းကုန်အားတင်းကြိုးစားနေကြတာပဲ…
မိခင်ကြီး (၂)လပြည့်အတွက် ရည်စူးပြီး လပတ်ဆွမ်းကပ်အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သွန်းသစ္စာဇော် ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး သွန်းသစ္စာဇော်ကတော့ ဒီနေ့မှာ အလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ ဆွမ်းကပ်အလှူလေးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မိခင်ကြီး ကွယ်လွန်တာ (၂)လပြည့် လပတ်လည်အတွက် ပြုလုပ်တဲ့အလှူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွန်းသစ္စာဇော်ကတော့…
မွေးရာပါလက်နှစ်ဖက်မပါပေမဲ့ မိသားစုစားဝတ်ရေးအတွက် ကာတွန်းပုံများရေးဆွဲပီးဝင်ငွေရှာခဲ့တဲ့ ကောင်လေး
မွေးရာပါလက်နှစ်ဖက်မပါပေမဲ့ မိသားစုစားဝတ်ရေးအတွက် ကာတွန်းပုံများရေးဆွဲပီးဝင်ငွေရှာခဲ့တဲ့ ကောင်လေး ထိုင်းနိုင်ငံ Phitsanulokပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် ၁၇နှစ်အရွယ် ကောင်လေးသည် ကံဆိုးစွာဖြင့် မွေးရာပါ လက်နှစ်ဖက်ပါမလာခဲ့သော်လည်း မိဘကျေးဇူးသိတတ်သော သားလိမ်မာလေးအဖြစ် အများဧ။်ချီးမွမ်းခြင်းများစွာကို ခံနေရသည်။ ကောင်လေးသည် လက်နှစ်ဖက်လုံးမရှိတာတောင် ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲ…
ဖီးကြမ်းငှက်ပြောသီး စားတဲ့သူတိုင်း ဆင်ခြင်စရာ အချက်တစ်ခု
ဖီးကြမ်းငှက်ပြောသီး စားတဲ့သူတိုင်း ဆင်ခြင်စရာ အချက်တစ်ခု ဖီးကြမ်းငှက်ပြောသီး စားတဲ့သူတိုင်း ဆင်ခြင်စရာ အချက်တစ်ခု (အသံတိတ် လူသတ်သမား) ကိုယ်တွေ့လေးမို့ ပြောပြအုန်းမယ်။အားကစားလုပ်တော့ ငှက်ပျော ဖီးကြမ်းစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝယ်လာတယ်။ဝယ်တဲ့နေ့ ဝင်းနေတော့ ၂လုံး စားတယ် နည်းနည်း ရင်ပူတာခံစားရတယ်။ ငှက်ပျောသီးကြောင့်လို့…
ကျောင်းတုန်းက လူကြားထဲမှာဆူခဲ့တဲ့ဆရာကို လက်စားချေရန်ဆရာရဲ့သားကိုအရွယ်ရောက်တဲ့အထိစောင့်ကာ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ကျောင်းတုန်းက သူမအား ဆူပူခဲ့သည့် ဆရာဖြစ်သူကို လက်စားချေနိုင်ရန်အတွက် ဆရာ၏သားဖြစ်သူအရွယ်ရောက်သည်အထိစောင့်ကာ လက်ထပ်ယူခဲ့သည့် ကောင်မလေးအငြိုးအတေးထားတတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်သော အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပေ။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စိတ်အခန့်မသင့်သည့်အချိန်မျိုးကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပေမယ့် နားလည်ပေးလိုက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ယခုတွင်လည်း ကောင်မလေးတစ်ဦးသည် သူမကျောင်းသူဘဝအချိန်က…